Ukulungiswa kwengubo yomshado kuyindlela ejabulisayo kuyo yonke intombazane-intombazane. Ngemuva kwakho konke, ufuna ukubukeka njengosuku olubaluleke kunazo zonke futhi olujabulisayo empilweni yakho, hhayi nje amahle kuphela, kodwa futhi okuqala. Fata ngezandla zabo siqu - lokhu yi-"zest", ekwazi ukwenza noma yisiphi isambatho somshado esiyingqayizivele. Ukwenza lokhu ngokuzenzekelayo noma iyiphi intombazane, enezimfanelo zokuqala zokuthunga, ingaba. Futhi amathiphu ochwepheshe abanolwazi oluqoqiwe kulesi sihloko uzokusiza.
Indlela yokugoqa isembozo ngezandla zakho: umsebenzi wokulungiselela
Ukuze ukhiqize izembozo ekhaya, amathuluzi alandelayo nezinto ezidingekayo kuzodingeka:
Inkinobho ye-Hairpin (yombala wezinwele);
Ukungabonakali (izingcezu ezingu-6-8);
Udonsa ukotini omhlophe noma isilikhi;
Thatha inani lezindwangu, kuye ngokuthi uthanda ukuthunga umkhumbi isikhathi esingakanani. Nazi izibalo ezilinganiselwe: ubude emahlombe bunamapulangwe angama-55-60 cm, kuya emaceleni - 75-80 cm, eminwe - 100-110 cm. Ngendwanguzelo ngesitimela kuthatha amamitha amabili noma ngaphezulu.
Okokuqala, udinga ukwenza umgodi wokuphila wangempela kusuka ephepheni. Indlela yokwenza lokhu, utshelwe ngesibonelo sokukhiqiza iveli lesidlo esiphakathi. Ikhasi elilodwa lephepha elilinganisa u-170x170 cm, liboshwe ngesigamu ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla, bese ligoqiwe ngesigamu ukusuka phezulu kuya phansi. Manje umshini wokusebenza uhlotshiswe ngokulandelana kusuka ekhoneni elingezansi elingakwesokudla kuya ekhoneni eliphezulu elingakwesokunxele. Kumele kube noxantathu wezingxenye ezingu-8 zephepha. Futhi uphinde ugobe ingxenye ngokudayelana ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla. Manje sithola unxantathu nge-angle ° 80, equkethe izingxenye ezingu-16 zezinto ezibonakalayo. Sika eceleni komshini wokusebenza emsebenzini. Veza iphethini (kufanele ibe yinto ejikelezayo), gqoka indwangu futhi uvikeleke ngezikhonkwane. Emkhawulweni wephethini yephepha, unqume umsebenzi owenzela umsebenzi wesikhumba esizayo.
Fata ngezandla zakho: isiteji sokuthunga nokucubungula
Umshini wokushisa usethe emisebenzini yomsebenzi ngezindwangu ezinamathele futhi ugwebe eceleni komphetho womsebenzi nge-seam overhead. Ukwenza umcengezi uphumelele, futhi ekupheleni kwemicu ye-tulle ayinqanyuliwe, udinga ukusebenza emaphethelweni womkhiqizo ngokunamathela kwendwangu.
Ukuhlangana nokuhlobisa iveli
Hlanganisa i-round billet ngesigamu ukuze umsila ophansi ungama-25-30 cm ubude kunaphezulu. Beka ukunamathiswa ngokugxila emgqeni bese uyidonsela phansi ububanzi be-comb-comb. Beka indawo yomhlangano ngebhebhoni, obeka phezu kwayo inqwaba. Ukuze usebenzise kahle izandla zakho zibukeka zijabulisa, zama ukwenza zonke izinyathelo ngokucophelela.
Ukuhlobisa kahle i-accessory yakho eyisikhonkwane yesandla somakoti kungaba ubuhlalu noma ubuhlalu obuncane bombala omhlophe noma wesiliva. Ukuze wenze lokhu, kudingeka badonwe ngendlela yokungahambisani ne-glue yendwangu noma ukugoqa esiqongweni esingaphezulu kweveli. Ikhefu lingabuye lihlotshwe nge-lace, izimbali zokufakelwa noma ezintsha. Amantombazane-amashadi angenza imihlobiso yembombo yebhebhoni ye-satin, ubumba lwe-polymer, indwangu noma indwangu.
Indlela 'yokwenza abangane' zonke izakhi zomshado womshado?
Zonke izingxenye zesithombe somlobokazi kufanele zihlanganiswe ngokuvumelana nomunye nomunye: ukugqoka, iglavu, nesembozo. Ngezandla zakho, ungabenzelela umhlobiso ofanayo ngesimo se- embroidery ezintathu, ububanzi noma imihlobiso emihlobiso. Ngaphezu kwalokho, ngekhanda lezinwele, ungaphinda ufake izakhi zokuhlobisa ezifanayo, ezisetshenziselwa isembozo nezinye izakhi zengubo.
Ngemva kokufunda zonke lezi zincomo esihlokweni esithi "Imbobo Yomshado Ngezandla Zakho", ungakwazi kalula ukuthungela izambatho zomakoti ezihlakaniphile ekhaya. Futhi ungikholelwe, lokhu kuyoba yinto ekhethekile kunazo zonke futhi yangempela ezokwenza isithombe sakho sobubele nesithandwa.
Ngingaba ukuya ekolishi ngemva kokuthola iziqu ekolishi noma esikoleni lobuchwepheshe?